China SEBIC 700c moto hidin-dàlana hidin-dàlana any an-tanàna tanàna sy orinasa mpamokatra bisikileta | Funncycle
SEBIC 700c môtô afovoan'ny herinaratra mandeha bisikileta an-tanàna
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fahaizantsika amin'ny E-Bikes miaraka amin'ireo singa manankarena avy any Shimano, Tektro ary marika hafainganam-pandeha bisikileta hafa dia mikendry ny hitondra anao ny bisikileta elektrika tsara indrindra eny an-tsena.
Haben'ny kodiarana HAFA
maotera Brushless, 36V 200W Mid Motor-Bafang M800
Azo aforitra ENY
Range isan-kery 10 - 30 km
Laharana maodely BEF-EEL700M
filanjana 700 * 28C firaka vita amin'ny alimina 6061, nohosorana TIG
Fork Aluminium 700C, lasitra TIG
kodiarana INNOVA 700 * 28C A / V Mainty
Gear Set Hafainganam-pandeha 9
Bateria 36V 7.8AH, bateria lithium, miaraka amin'ny charger 2A-SANS
-maso Sine Wave Controller tafiditra ao anaty motera
Kalitao avo: Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fahaizantsika amin'ny E-Bikes miaraka amin'ireo singa manankarena avy any Shimano, Tektro ary marika hafainganam-pandeha bisikileta hafa dia mikendry ny hitondra anao ny bisikileta elektrika tsara indrindra eny an-tsena.
Bika sy fampiatoana: Namboarina tamin'ny sehatra mitovy amin'ilay Monta, ilay bisikileta elektrika malaza indrindra. Ny firafitry ny firaka aliminioma sy ny fampiatoana eo aloha azo ahodina dia namboarina mafy sy notsapaina. Ny Monta X dia mbola fitambarana lanja maivana tonga lafatra, fampisehoana an-dàlana tsara ary faharetana.
Bateria sy motera: Fitaovana motera roa heny 250W hatrany, dia ho gaga ianao amin'ny zava-bitany amin'ny fiakarana havoana sy ny fiatrehana ny toe-piainana samihafa (miovaova). Ny batterie lithium Samsung 36V roa azo esorina dia mamela ny mandeha lavitra sy matanjaka kokoa. Seranan-tsambo USB namboarina ao anaty bateria dia ahafahanao mameno ny fitaovanao marani-tsaina mandritra ny dia.
Fihetsiketsehana mitaingina: Ny shifter Shimank, crank ary ny derailleur dia miantoka ny fivezivezena milamina eo anelanelam-bidy samihafa. Ny 14-34T Mega Range Cassette dia manamora kokoa ny fiakarana havoana sy fampiasana azy io amin'ny tanjona tsy an-dalambe. Ho fanampin'ilay fantsom-panafody, haavo 5 an'ny pedal-assist no natao hanomezana fahafaham-po ny filanao isaky ny mandeha tsirairay.
Teknolojia fampijanonana azo itokisana: Amin'ny maha teknolojia fijanonana tsara indrindra eny an-tsena, ny freins Tektro dia miantoka ny fiarovana anao amin'ny alàlan'ny sensor preno tafiditra mba hanapaka ny herinaratra rehefa mampiditra ny frein.
Asehoy sy famantarana: Ny fampisehoana LCD misy jiro dia manome anao ny fampahalalana rehetra ilainao mandritra ny dia, toy ny hafainganana, haavo pedal, haavon'ny batterie, halaviran'ny dia, sns. Ny Monta koa dia manana jiro LED sy jiro LED aoriana, hahazoana antoka fa ny fiarovana raha mila mandeha mandritra ny alina ianao.
Teo aloha: SEBIC 26 mirefy tendrombohitra matavy tiresnow moron-tsambo fiara mpitondra herinaratra bisikileta
Manaraka: SEBIC 20 inch aluminium miafina bateria miafina mametaka bisikileta elektrika
Làlana bisikileta elektrika
Factory an'ny bisikileta